Israa’eel buufata waraana Suuriyaa tokko Misaa'elaan dhoofte. - NuuralHudaa
Israa’eel buufata waraana Suuriyaa tokko Misaa’elaan dhoofte.
Buufanni waraana Suuriyaa kan guyyaa har’aa Isra’eel haleellaa irratti raawwatte kun, naannawa magaalaa guddoo Suuriyaa Dimaashqiitti kan argamu yoo tahu, Misaa’elaan kan rukutame tahuu TV’n biyyattii gabaase.
Haleellaa kanaan Kuusaa boba’aa buufata kanaa dabalatee, qabeenyi heddu kan barbadaawe yoo tahu, Haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti mootummaa Isra’eel irraa ibsi keenname tokkolleen hin jiru. haata’u malee Haleellaan kun buufata waraanaa Iraan Suuriyaa keessatti ijaaraa jirtuun wal qabatee kan raawwatame tahuu hin oolu jedhamee tilmaamama
May 23, 2022 sa;aa 2:44 am Update tahe